Uhlelo Lokufaka Lwe-indlu
Uhlelo lwe-ECO HOUSE
ELK indlu yase-prefab
Idolobha Nendlu Yezwe
ophahleni baphenduke futhi baguquke
Sesha ikhathalogi yendlu manje!
Indlu eyakhiwe kusengaphambili i-CONCEPT-M 159 Bad Vilbel
I-Villa isitayela se-Bauhaus
Indlu yedolobha yangaphambi kwamanje enefasitela le-bay neophahla olugwedliwe
I-villa entsha yanamuhla yedolobha ene-carport, ukwandiswa kwewindows WeberHaus. Imitha ecishe ibe ngu-190
I-Luxury izwe villa yesimanje ngesitayela sesiNgisi
Indlu yokunethezeka yase-villa ezweni lesiNgisi isitayela iyindlu eyakhiwe ehlelwe ngokwakhiwa ngokwakhiwa kophahla lwendlu kanye negalaji eliphindwe kabili kusuka kumhlinzeki WeberHaus, Njengoba cishe 640
Indlu yesimanje yekhiyubhu iSan Pedro enophahla oluyisicaba
I-Kubus Haus San Pedro yesimanje yokwakha ophahleni oluyisicaba kanye ne-white wall plaster ngesitayela seBauhaus iyindlu eqhubekayo egxilisiwe evela e-GUSSEK HAUS. Isikwele
I-villa yedolobha lwanamuhla iMelina enophahla olubekiwe negalari
I-villa entsha yanamuhla yedolobha iMelina enophahla oluphuma ngaphandle nokhuni oluhle oluyisisekelo sokhuni iyindlu yesimanje eyenziwe kabusha evela kumhlinzeki GUSSEK HAUS. Indlu ehlelelwe isikwele
I-Bungalow Piedmont yesimanje enophahla oluyisicaba & egalaji
Indlu yaseBungalow Piemont ebushelelezi enegaraji nophahla oluyisicaba olwakhiwe ngesitayela seBauhaus iyindlela eyayihlelelwe indlu ngayinye yaseGUSSEK. Uhlelo olubanzi lwe-bungalow floor lusezingeni lomhlaba
I-villa yedolobha yanamuhla iBaggio enophahla olubekiwe
I-villa Baggio entsha yanamuhla enophahla oludwetshwe ophahleni, egalaji kanye nophahla lwesakhiwo se-clinker luyindlu yedolobha ebanzi evela kumakhiqizi wezindlu asetshenzisiwe wasendulo i-GUSSEK HAUS. Indlu eyisikwele yomndeni owodwa
Hudula indlu yomndeni owodwa-BALANCE 146 nophahla olubekiwe
Indlu yesimanje yophahla lwe-gable BALANCE 146 evela kumakhiqizi wezindlu osungulwe iBien-Zenker ilungele iziza ezincanyana. Uhlelo lwendlu yomndeni lunamakamelo ayi-5 nxazonke
Indlu ehlanganisiwe yesimanje nophahla oluyisicaba ngesitayela seBauhaus
Indlu yanamuhla yomndeni owodwa ophahlekile ophahleni lwesitayela seBauhaus iyindlu yomakhi ohlelelwe ngokukhululekile kusuka kumenzi wezindlu osungulwe ngaphambili WeberHaus. Uhlelo olubanzi lwendlu ebanzi lune-6
Umkhaya Single (570)
amafulethi endlini (3)
indlu umndeni Amabili (50)
isinyathelo / Disclaimer / Ubumfihlo